ZBC Yoshaisa Vanhu Mufaro neNyaya yeMitero
Vanhu vakawanda vari kuchema zvikuru nekushungurudza nemaporisa pamwe nevashandi venhepfenyuro yeZBC vachimanikidzwa kubhadhara marezenisi ekushandisa nhepfenyuro yeZBC kunyange vamwe vachiti havasi kuona kana kuteerera kuzvirongwa zvenhepfenyuro.
Pasi pemutemo weBroadcasting Service Act, vanhu vese vane mawayiresi nematerevhizheni vanofanirwa kubhadara mitero kuZBC.
Asi veruzhinji vari kuramba kubhadara vachiti vari kuona nekuteerera nhepfenyuro dzekunze dzinenge SABC, Aljazeera nedzimwe paDSTV pamwe nepa Free-to-Air Satellite.
Vamwe vevanhu ava vanoti havasi kuzobhadara ZBC nekuti havazi kuona zvirongwa zvayo. Izvi zvapa kuti vanhu vakawanda vaendeswe kumatare uye vamwe vavhundutsirwe nemapurisa senzira yekuvamanikidza kubhadhara mitero iyi.
Mhuri ine terevhizheni neredhiyo inofanirwa kubhadara madhora makumi mashanu pagore.
Vane maredhiyo mudzimotokari dzavo vanonzi vabhadare madhora makumi matatu, uye vakasabhadara nenguva inenge yatarwa, vanonzi vabhadare yava madhora makumi matanhatu.
Mumwe mugari wemuBulawayo, Muzvare Tariro Nyoni, vanoti mumwe wevanhu vari kunetserwa mitero yeZBC, ivo vasingaone zvirongwa zvenhepfenyuro iyi.
Magweta eMedia Lawyers Network, ayo anoshanda neMisa-Zimbabwe, akabuda nechisungo pamusangano wawo wakaitwa pakupera kwesvondo kuMasvingo chekuti vachapikisa mitero iri kubhadhariswa vanhu neZBC mumatare edzimhosva.
Mukuru weMisa-Zimbabwe, VaNhlanhla Ngwenya, vanoti vanhu vakawanda vari kuchema nenyaya yekushungurudzwa neZBC iyi nokudaro panofanirwa kutorwa matanho akasimba ekumisa ZBC zvairi kuita.
Hurukuro naMuzvare Tariro Nyoni
Hurukuro naVa Nhlanhla Ngwenya